ဂျီပီအက်စ်အညွှန်းနည်းလမ်းချွတ်နေသည် - ပြုပြင်မွမ်းမံ
မေးခွန်း ဂျီပီအက်စ်အညွှန်းနည်းလမ်းချွတ်နေသည် - ပြုပြင်မွမ်းမံ
2 နှစ်ပေါင်း 10 months ago -2နှစ်ပေါင်း 8 months ago #521 by Gh0stRider203
ငါကနောက်ကျဒီနေရာမှာနည်းနည်းပိုပြီးမကြာခဏဤသို့ပြုင့်သတိထားမိပါတယ်။ 2017 ရှေ့မှာပြုလေ၏ဘယ်တော့မှ ......
သငျသညျ DFW သို့, ထို့နောကျရုံမြောက်ဘက်ကငါ့လမ်းကြောင်းငါယူလို့ယူဆတယ်ပေါ့အတွေးကိုမြင်ရ, ပြီးတော့ LFRG, ထို၏မြောက်ဘက်မှအကြှနျုပျ၏လက်ရှိလမ်းကြောင်းနိုင်ပါတယ်။
ငါကမအဘယ်ကြောင့်တစ်ဆုံးရှုံးမှုမှာပေါ့။ တခါတရံဿုံနောက်ကျောနှင့်ထွက်အကြိမ်ပေါင်းများစွာသင့်လျော်သောလမ်းကြောင်းပျံသန်းလိမ့်မယ်, ပြီးတော့သူက Nope နဲ့တူရဲ့ကြိမ်ရှိပဲ! အဲဒါကိုလုပ်နေတာမဟုတ်ပါ .....
DFW မှာအကြှနျုပျ၏ဆင်းသက်အနီးစုံလင်ခြင်းရှိ၏။ ညာဘက် 'dot နှင့် touchdown မှာ -.37 ပေ / sec တစ်နွယ်ဖွားမှုနှုန်း (အရမ်းရယ်ရတယ်မနာလိုဖြစ် .... ရှေ့ဆက်) ရက်တွင်
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်:2နှစ်ပေါင်း 8 months ago နေဖြင့် Gh0stRider203.
2 နှစ်ပေါင်း 10 months ago #524 by Dariussssss
ကောင်းပြီ, သငျသညျအရာတစ်ခုခုတက် messed ။
သငျသညျအပြီးချွတ်ယူ, လမ်းကြောင်းနှင့် ပတ်သက်. ဘာမှပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေခဲ့သလား ငါသည်သင်တို့ကိုပြု၏, f,FSX ရှုပ်ထွေးတက်တစ်ခုလုံးကိုလေယာဉ်ခရီးစဉ်အစီအစဉ်နှင့်အတော်လေးမကြာခဏပထမဦးဆုံးလမ်းအမှတ်ဖို့လေယာဉ်ကိုပြန်ဆောင်ခဲ့ဦးမည်။ သို့မဟုတ်အစား GPS စနစ် / FMC ၏ HDG mode ကိုပြောင်းပါ။ ကျွန်မစစ်ဆေးနှင့်နှစ်ဆမျှအမှားအယွင်းများဒါမှမဟုတ်တချို့အရူးအလှည့်ဒါမှမဟုတ်တူသောဘာမှရှိမယ့်သေချာစေရန်လမ်းကြောင်းစစ်ဆေးဒါကြောင့်ပါပဲ။
2 နှစ်ပေါင်း 10 months ago #526 by Gh0stRider203
Nope အရမ်းရယ်ရတယ်။ ငါ IFR ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဦးတည်ရာမှ IFR မှ VFR ကနေအကူးအပြောင်းဖို့ရှိသည်နှင့်အကြောင်းအချက်မှာငါမျှော်စင်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိပြီးသားပေါ့မဟုတ်လျှင်ကျွန်မအရာမပြောင်းကြဘူး။
ငါထိုင်မှာကြည့်ကြဘူး FSX ဤအရှည်လျားပျံသန်းမှုကာလအတွင်း။ ဒီလိုစစ်သင်္ဘောများ၏ကစားကမ္ဘာ့ဖလားကဲ့သို့သောအခြားပစ္စည်းပစ္စယ, (ငါအခုလုပ်နေတာပေါ့ထားတဲ့အရမ်းရယ်ရတယ်) ပြုပါ
2 နှစ်ပေါင်း 10 months ago #527 by Dariussssss
... ငါအနည်းငယ် '' ရေကန်ကျော် '' လေယာဉ်ခရီးစဉ်, အမှန်တကယ်တဦးတည်းကအရမ်းရှည်လျား KPHX-LYBE နှင့်လေယာဉ်ပျံကဖြစ်သင့်သည်ညာဘက်ဘယ်မှာပေါ်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့လေသည်။ ငါမှာတစ်ချိန်ကတစ်ခုလုံးလေယာဉ်ခရီးစဉ်လုပ်ဖို့မတတျနိုငျ, ဒါကြောင့်ငါအနည်းငယ်အစိတ်အပိုင်းများထဲမှာကိုပြု၏။ တစ်ချိန်ချိန်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏နဲ့ကျွန်မအချိန်အတန်ကြာဖမ်းသည့်အခါဆက်ပြောသည်။ ငါကလည်းလိုပဲပေါ်မှာအစက်အပြောက်ခဲ့ပါတယ်။
သငျသညျအကြှနျုပျကိုကြောင်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်အစီအစဉ်ကိုပေးပို့ဖို့အတှကျကဖြစ်နိုင်ပါသလော (FB သို့မဟုတ် e-mail,) ငါပွုဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်ဤတဦးတည်းအပေါ်ကိုအသုံးပြုနေဘယ်လေယာဉ်ပျံ?
2 နှစ်ပေါင်း 10 months ago #528 by Gh0stRider203
ငါ KDFW ပြုပါ - ကြောင့်က max ကိုအကွာအဝေးတစ်ဦးမျှမျှတတလွယ်ကူသောချဉ်းကပ်ဖို့နီးစပ်မယ့်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖို့ 747-400LCF အတွက် LFRG (သင်လေယာဉ်ပြေးလမ်း 12 ရသည့်အခါအရမ်းရယ်ရတယ်), နှင့်ရလဒ်အဖြစ်, ငါသည်ဤလေယာဉ်ခရီးစဉ်နှင့်အတူ VA သို့များအတွက်အများဆုံးငွေရှာ ။
ငါသုံးတဲ့3အစီအစဉ်များနှင့်အတူဇစ်ဖိုင်ပူးတွဲပါပါတယ်။
KDFW - LFRG လေယာဉ်ပြေးလမ်း 12 & 30 မှ VFR နှင့် IFR လေယာဉ်ပြေးလမ်းမှ 30
ဖိုင်အရွယ်အစား:2KB
2 နှစ်ပေါင်း 10 months ago #529 by Dariussssss
အဆင်ပြေလား။ ငါကပုံမှန် 747ERF အတူကြောင့်အနည်းငယ်ကွဲပြားပြုလိမ့်မည်။
ဒါဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ... အမှားသည်အဘယ်မှာရှိဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲ့ ... VFR အပေါ်ထိုကဲ့သို့သောပျံသန်းစေငါ့ထံသို့အတော်လေးထူးဆန်းပါတယ်, ကိုယ်ကထွက်ကြိုးစားပါလိမ့်မည်။
2 နှစ်ပေါင်း 10 months ago #531 by Gh0stRider203
အကြှနျုပျ၏ပျံသန်းမှု၏ 99.999% VFR နှင့် KDFW များမှာ - LFRG ငါနှင့်အတူဤပြဿနာရှိသည်သာလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ငါ IFR ကြိုက်နှစ်သက်ကြပါဘူး။ ငါသည်သင်တို့ကိုမယ့်ဂုဏ်နယူ-ပယ်ပြီးနောက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟာ cancel နေသည့်အခါ VFR ရာသီဥတု IFR လုပ်နေတာအတွက်အချက်, ဘာကိုဆိုလိုတာ?
2 နှစ်ပေါင်း 10 months ago #532 by Dariussssss
အကြှနျုပျ၏ပျံသန်းမှု၏ 99.999% ကငရဲအဖြစ်နှောင့်အယှက်မယ့်သော်လည်း ATC နှင့်အတူ IFR ဖြစ်ကြ၏, ဒါပေမယ့်ငါတတ်နိုင်သမျှလက်တွေ့ကျကျပြုလုပ်ထားရန်, ငါ၏အကောင်းဆုံးလုပ်ပါ။
ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိဤမျှကောင်းသော, လေယာဉ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ right ဖြစ်ပါတယ်။
2 နှစ်ပေါင်း 10 months ago #533 by Gh0stRider203
ငါပြုပါလိမ့်မယ် .... ဒါပေမယ့်ငါအိပ်လို ငါသည်သင်တို့ကိုနာရီတက် add ပါစေလိမ့်မယ်
အဘယ်ကြောင့်ငါသိပ်ပျံသန်းသလဲ? ကောင်းစွာတဦးတည်းအဘို့ .... ဒါကကျွန်မဧပြီလဒါမှဝေးလုပ်ပြီးပြီအရာဖြစ်တယ်။
ဒုတိယအချက်မှာငါ VA သို့များအတွက်အခုအချိန်မှာပျံတစ်ဦးတည်းသာတယ်, လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်ကျစရိတ် 961,250 pax ငှက်ငှားရမ်းငွေပေးချေမှုအတွက် $2တစ်လ (နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦး 777-200LR ဖြစ်ကြသည်), နှင့် 1,258,334 ကုန်တင်သင်္ဘောများအတွက် $2တစ်လ (747 များမှာ -800F) ။
ဒါဟာကျနော်တို့ကိုဖုံးအုပ်တို့ကိုပယ်ပေးဆောင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ $ အောင်လတိုင်းအတွက်လုံလောက်သောအတွက်ဆောင်ကြဉ်းသေချာစေရန်ငါ့ကိုအထိပါပဲ။
2 နှစ်ပေါင်း 10 months ago -2နှစ်ပေါင်း 10 months ago #534 by Gh0stRider203
ငါပြီးခဲ့သည့်လကပဲ 300K nm ကျော်လုပ်ခဲ့တယ်, ဘုရားသခင်ကိုအရမ်းရယ်ရတယ်မည်မျှနာရီသိတယ်
ဒါဟာဖြစ်ကောင်းသင်တို့အဘို့ဂုဏ်နလုပ်ရပ်ထတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာအစဉ်အမြဲငါ့အဘို့ထိုသို့ပြုမထားဘူး။ ဒါဟာလုံးဝကျပန်းင်
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်:2နှစ်ပေါင်း 10 months ago နေဖြင့် Gh0stRider203.
0.270 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်